Shiinaha HSL-CNC3826 Soosaarayaasha mashiinka muraayadaha otomaatiga ah iyo alaableyda | Huashili
Iska yaree dongle
Tayaynta dongle (sida waafaqsan nidaamka)
Shaagagga huruudda ah (oo leh boolal)
Xaragada gudaha ee laba geesoodka ah
AC xiriiriyaha LCIROM5N
waalka magnetic 4V21008B (24V)
Mouse pad, kiiboodhka
Isku xirka biibiile hawo hawo dhaqso leh
Raadka qalabka： 7 mitir laba jibbaaran
Hawl wade: Dhalo jabinta：2 qof（Dadka leh khibrada jabinta dhalada waxay si fiican uga faa'iideysan karaan jarista waxtarka）
Astaamaha 1.Mashiinka qiimaha buuxa iyo rakibida saxnaanta sare ee la soo dhoofiyo iyo qaybaha kale ee heerka sare ayaa si wax ku ool ah u damaanad qaadaya saxnaanta iyo xasilloonida goynta dhalada, waxay leeyihiin nolol adeeg dheer waxayna la kulmi karaan goynta qaababka kala duwan ee muraayadda glassXadiidka tareenka, patent gaar ah, muraayadda la jaray ayaa leh saxnaan sare;Miiska mashiinku wuxuu ka samaysan yahay biyuhu, dabka-shidan yahay, heer-kul sarreeya oo hooseeya u adkaysta, iyo walxaha xinjirowga lidka ku ah, oo aan waligood is beddeli doonin;
4.Bindex barta shaqada ee iskaanka iyo infrared iskaanka ah ee sheybaarka qaabdhismeedka qaaska ah;
5.Farsamaynta mashiinka jarista mashiinka caqliga badan, oo si weyn u wanaajiya ka faa'iideysiga muraayadaha isla markaana yareynaya qiimaha wax soo saarka ；
Shaqada 6.Air-sabaynta, hagaajinta waxtarka shaqada, waxay la timaadaa mashiinka gawaarida otomaatiga ah iyo mashiinka kala-goynta;
7. Cirbadeynta saliida otomaatigga ah iyo shaqeynta hagaajinta cadaadiska otomaatigga ah ee mashiinka jarista, waxay si wax ku ool ah u damaanad qaadeysaa xasiloonida goynta iyo jarista saameynta;
8. Ma jiraan shuruudo gaar ah oo loogu talagalay hawlwadeennada, hawlgal fudud iyo maamul fudud.
Qeybta Mashruuc Tilmaamaha Mashruuca
Hawlaha Hawlaha caadiga ah Goynta software software 1.Professional goynta galaas xirfad leh iyo filaayo in functionettingting function: si weyn loo hagaajiyo heerka goynta galaaska iyo waxtarka wax soo saarka.2. La jaan qaadi kara barnaamijka OPTIMA ee Talyaani ah iyo barnaamijka GUIYOU ee caadiga ah softiweerka G-ga: Xaqiiji guud ahaan faylasha qaababka kala duwan.3.Fault ogaanshaha iyo function alaarmiga: Waxay si otomaatig ah u duubi kartaa xaaladda socda ee mashiinka ee habka wax soo saarka, alaarmiga cilad iyo dhibaatooyinka soo bandhigida.
Meelaynta laser Fiber 1. Raadinta tooska ah iyo meelaynta muraayadda: Cabbiraadda saxda ah ee booska dhabta ah iyo xagasha leexashada ee muraayada, iyadoo la ogaanayo toosinta tooska ah ee wadada goynta daabka, iyo hagaajinta waxtarka2. Sawirka qaabdhismeedka caqliga leh: Baadhuhu wuxuu si xikmad leh u baari karaa walxaha qaabeysan wuxuuna si otomaatig ah u soo saari karaa sawirada si loo ogaado goynta dusha.
Tiknoolajiyada jar Cadaadiska daab goynta waxaa xakameynaya koronto xakamaynta saxda ah ee korantada, iyo dhululubo ayaa si isku mid ah u riixaya cadaadiska si uu daabku si fiican ugu haboonaado dusha sare ee muraayadda si uu u jaro, isaga oo ka fogaanaya boodboodka sababo la xiriira dhibaatooyinka tayada dhalooyinka.
Shaqada jabinta muraayadda Ku rakib usha ejector dusha sare ee goynta. Dhululubadu waxay riixaysaa usha ejector-ka si ay uga jarto muraayadda.
Mashiinka Socda Mashiinka hoose ee mashiinka waxaa lagu qalabeeyaa 4 giraangiraha nylon xamuul ah oo xamuul ah si loo fududeeyo macaamilka si loogu riixo dhaqdhaqaaqa. Meeleynta ka dib, afarta cagood ayaa la hagaajiyay si ay u taageeraan xajinta xasilloonida mashiinka
Hawlaha ikhtiyaariga ah Calaamaynta otomaatiga ah Beddel calaamadeynta gacanta. Marka loo eego shuruudaha macaamiisha, daabacaduhu wuxuu daabacaa sumado duubaya macluumaadka muraayadda Calaamadda waxaa lagu dabaqayaa dusha muraayadda u dhiganta iyada oo lagu calaamadeynayo dhululubada.（Waxaan kula talinaynaa macaamiisha inay qaabeeyaan shaqada calaamadeynta）
GaadiidkaAstaamaha Barxadda goynta waxaa lagu qalabeeyaa suunka wax lagu raro. Looma baahna in gacanta lagu dhaqaajiyo muraayadda. Muraayadda la jaray waxaa loo wareejin karaa miiska jebinta muraayadda hawada iyada oo loo sii marayo suunka xamuulka, qalliinka jabintana waxaa lagu sameeyaa miiska jabinta dhalada.（Waxaad ubaahantahay inaad iibsato miiska jebinta muraayadda hawada）
Daaweynta gabowga ka dib markii alxanka qaybaha adag. Saxanka hagaajinta dhinaca alwaaxa waxaa lagu farsameeyaa birta si loo hubiyo saxsanaanta iyo xasilloonida.
Aluminium istiraatiiji ah oo isku xiran T-WIN tareen toosan, saxnaan sare, buuq hooseeya, qaab dhismeedka doorbidista qalabka sare
Qalabka aluminium ee loo yaqaan 'patent aluminium' oo isku dhafan oo tareenka wareega ah, tareenka wadista awoodda tareenka, rogista wadada, khilaafka hoose ayaa hubin kara hawlgalka xasilloon ee buundada goynta
Kartoo taageere-awood sare leh, cadaadis dabayl sare iyo qulqulka weyn, hubi sabeynta muraayad siman.
Guddiga cufnaanta badan ee biyuhu waa substrate, dusha sarena waxaa lagu daboolay wax-soo-saarka warshadaha lidka ku ah. Hubso in adeegsiga xasilloonida ee jawiga qoyan.
Qaadashada sagxad jireed iyo qaabdhismeed jilicsan si loo hagaajiyo xoogga dusha ilkaha oo si wax ku ool ah loo yareeyo buuqa
Awood sare 7525 silsilad jiidan aamusnaan ah
Shidaalka saliida daabku wuxuu qaataa habka buuxinta saliida si otomaatigga ah, iyada oo aan faragalin lagu sameynin.
Goynta matoorka wadista
2 deji waxqabadka sare ee xakamaynta warshadaha mashiinka adeegga ee xakamaynta saxda ah iyo hawlgalka fudud.
Kaararka guddiga khaaska ah ee Huashil, nidaamka xakamaynta Gugao PLC.
Wuxuu adeegsadaa qalabka wax lagu baaro ee Panasonic laser ka laga keeno Japan.
Bandhigga Dell, qeexitaan sare iyo waxqabad deggan
Kombiyuutarka martida loo yahay
Hawl-wadeen kombiyuutar karti-sare leh oo loogu talagalay xakamaynta warshadaha; sumadda muujinta qaraarka sare.
Laga soo dhoofiyay qaybaha maareynta summada koowaad ee caalamiga ah sida OMRON, AirTAC.
Length * width * height ： 3350mm * 3000mm * 1400mm
7.5kW （Isticmaal awood3KW）
Iska yaree dhumucda muraayadda
± 0.2mm / m （Iyada oo ku saleysan cabbirka xariiqa goynta ka hor inta uusan muraayadda jabin）
Xaqiijin la hubo
Xadiidka tareenka toosan
Bedelaha sawir qaadaha
Khad jilicsan oo sarreeya
X mashiinka adeegga dhidibka
1.8KW * 2Isku dheji
Y gawaarida adeegga
Qalabka sabeynta hawada
Xiga: HSL-YTJ2621 Mashiinka Mashiinka Dhalada ah
Line Assembly Goynta Automatic
Automatic Glass Loading Oo Machine Jarida
Mashiinka Mashiinka Goynta Muraayadda otomaatiga ah
Miiska Gawaarida Gawaarida Gawaarida Gawaarida ah